Fanamasinana ny eveka mpanampy vaovao :: Vory lanona tetsy Mahamasina ireo mpino katolika manodidina ny 130 000 • AoRaha
Fanamasinana ny eveka mpanampy vaovao Vory lanona tetsy Mahamasina ireo mpino katolika manodidina ny 130 000
“Tompo ô, ianao no itokiako”, tamin’io fehezantany io no lohahevitra nentin’ny mompera Andriantsoavina Jean Pascal nanamarihany ny fanamasinana azy ho Eveka, teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina, omaly. Vita tao anatin’ny ora efatra teo ho eo ny lamesa notarihin’ny Kardinaly Tsarahazana Désiré, filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka katolika eto Madagasikara sy ireo Eveka maromaro.
Niatrika izany teny Mahamasina ireo mpino katolika manodidina ny 130 000 sy ireo olo-manan-kaja isan-tsokajiny.
Nigadona ny tamin’ny 9 ora maraina, no nanomboka ny lamesa lehibe teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Natomboka tamin’ny famakiana ny taratasy manendry ny mompera Andriantsoavina Jean Pascal ho Eveka mpanampy eto amin’ny Diosezin’Antananarivo avy amin’ny Papa François, ny fotoam-pivavahana. Novakian’ny monsenera Paolo Rocco Gualtieri, solontenan’ny Papa miasa sy monina eto Madagasikara izany.
Misongadina tao anatin’io, ankoatra ny fanendrena azy, ny iraka hampanaovina an’ity Eveka vaovao ity, toy ny hoe hanaparitaka ny Evanjely sy ho mpiandry ondry.
Mbola nanamafy ny iraka hanirahana ny Eveka vaovao ihany koa ny hafatrafatra nataon’ny Kardinaly azy nandritra ny lahateniny, taorian’izay.
Nanome hafatra ho an’ny rehetra ihany koa ny Kardinaly. “Ilaina ny manetry tena eo amin’ny fiainana. Na inona na inona toerana misy anao dia mahaiza manetry tena”, hoy ny mpanolotsain’ny Papa, ny Kardinaly Tsarahazana Désiré.
Niroso tamin’ny fanamasinana ny Eveka vaovao ireo Eveka miisa telo, tompo-marika amin’izany, ny Kardinaly Tsarahazana Désiré, ny Arsevekan’Antananarivo Razanakolona Odon Marie Arsène sy ny Evekan’Antsirabe, Ranaivomanana Philippe, taorian’ny vaky teny. Nampatoriana tamin’ny tany ny Eveka vaovao sady narahina vavaka litania na fiantsoana ireo Olomasina isan-karazany nandritra ny minitra maro.
Vita izay no niroso tamin’ny fanosorana menaka sy ny fametrahan-tanana ireo Eveka rehetra niatrika teo. Nosalorana ireo fitaovana, toy ny lakroa, ny satroka ary ny tehina, izay marika maha mpiandry ondry azy ny Eveka Andriantsoavina Jean Pascal.
Feno fanetren-tena ny lahateny nataon’ny Eveka vaovao taorian’izay rehetra izay. “Misaotra anareo Fivondronamben’ny Eveka nandray ahy zandrikelinareo. Misaotra indrindra ny torolalana sy ny anatra omenareo an’ity zandrikelinareo, izay tsy mahalala izay atsimo sy avaratra akory. Misaotra ny Filohan’ny Repoblika nanampy betsaka nanatontosa ny fotoana anio. Misaotra indrindra an’i Dada sy Mama. Hatramin’ny fahakely no nanehoanareo ny fitiavanareo. Ianareo tokoa no lakana nitana, nitaiza sy nikolokolo hatramin’izay ka hatramin’izao ary hotantanin’i Masina Maria mandrakariva anie ianareo”, hoy izy.
Tsy nanadino nisaotra ny rehetra ihany koa izy ka nataony toy ny vazivazy ny hoe : “atao toy ny kabarin’ilay tsy mahay, voalohany misaotra, faharoa misaotra ary farany misaotra”, hoy ny Eveka mpanampy vaovao eto amin’ny Diosezin’Antananarivo.
Tsy nifarana ny fotoam-pivavahana, izay natrehin’ireo olom-panjakana maro, notarihin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, raha tsy tamin’ny 1 ora antoandro teo ho eo.
Baolina kitra – Afrika :: Resin’ny Fosa Juniors FC tamin’ny penalty iray ny Pamplemousses SC
Antoko mpanohitra :: Nisaraka tamin’ny tsy fitoviam-pijery ny fivoriana tetsy Anosy